6 Masaf Week hacks Master Class - Masaf Of The Day
Marka aad gabyi up for masaf 6-todobaad hacks fasalka sayidkiisa, aad ayaa isku diyaarineysa in ay helaan qaar ka mid ah macluumaadka weyn oo ku saabsan siyaabaha in la sameeyo faa'iido qaadashada reexaanta qaladaad farsamo oo aad tartan ku sameeyaan xitaa ma on Ujeedada a.
Waxaad maqli doontaa wax kasta oo ku saabsan kal-fadhi oo shaqo, kuwaas oo.
u badan tahay in doonnaa in aad waxbarashadaada bilowdo siyaabaha ay u dooran dublad, magnet hogaanka, dhisayaan liiska saxda ah, suuqyada affiliate iyo in kaliya maalinta ugu horeysa!
Sida aad horay u socdo waxa kale oo aad noqon doontaa barashada dublad iibka, horumar degdeg ah, sida loo sameeyo webinars adiga kuu gaar ah iyo xeeladaha iibka.
Mowduucyada la soo dhaafay ma ka yar muhiim ah sida sida la bilaabay soo saarka dublad iyo abuurista content soomi.